OTU ESI EMEPỤTA WINDO DISKI WINDOWS XP - WINDOWS - 2019
Mepụta diski akpa na Windows XP
Mgbe mgbe, mgbe ị na-azụ kọmputa dị njikere iji sistemụ arụmọrụ, ọ dịghị anyị nwere CD na nkesa nkesa. Iji nwee ike iweghachite, weghachite ma ọ bụ depụta usoro na kọmputa ọzọ, anyị chọrọ mgbasa ozi nwere ike ime.
Ịmepụta diski XP XP
Usoro dum nke ịmepụta diski disk na ike buut ka belatara ka ịdekọ ihe oyiyi zuru ezu nke sistemụ ahụ na diski CD efu. Ihe oyiyi ahụ na-enwekarị ndọtị ISO ma nweelarị faịlụ niile dị mkpa ibudata ma wụnye.
A na-emepụta bọtịnụ bọta ọ bụghị naanị iji wụnye ma ọ bụ degharịa usoro ahụ, kamakwa iji lelee HDD maka nje, rụọ ọrụ na usoro faịlụ ahụ, megharịa paswọọdụ akaụntụ ahụ. Maka nke a enwere mgbasa ozi multiboot. Anyị ga-ekwukwa banyere ha n'okpuru.
Usoro 1: ụgbọala site na mbido ahụ
Anyị ga-emepụta diski site na nbudata ngwa Windows XP site na iji usoro UltraISO. Na ajụjụ nke ebe ị ga-enweta onyinyo ahụ. Ebe ọ bụ na nkwado ọrụ maka XP adịkwaghị, ị nwere ike ibudata usoro ahụ naanị site na saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ iyi. Mgbe ị na-ahọrọ, ọ dị mkpa ịṅa ntị n'eziokwu bụ na ihe oyiyi ahụ bụ mbụ (MSDN), ebe ọ bụ na mgbakọ dị iche iche nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma nwee ọtụtụ ihe na-adịghị mkpa, oge na-adịghị, mmelite na mmemme.
Fanye ihe efu efu n'ime ụgbọala ma na-agba ọsọ UltraISO. Maka nzube anyị, CD-R dị mma, ebe ọ bụ na onyinyo ahụ ga-eru ihe karịrị 700 MB. Na windo nke usoro ihe omume ahụ, na menu "NgwaọrụAnyị na-ahụ ihe na-amalite ọrụ ndekọ.
Họrọ ụgbọala anyị na listi ọdịda "Mbanye" ma dozie oge kachasị oke nhọrọ nke nhọrọ ndị usoro ahụ chọrọ. Ọ dị mkpa ime nke a, dịka ọkụ ọkụ nwere ike iduga na njehie ma mee ka diski ma ọ bụ ụfọdụ faịlụ enweghị ike ịgụta.
Pịa na bọtịnụ ịchọgharị ma chọta onyinyo ahụ ebudatara.
Ọzọ, dị nnọọ pịa bọtịnụ ahụ "Dekọọ" ma chere ka usoro ahụ kwụsị.
The diski dị njikere, ugbu a ị nwere ike buut na ya ma jiri ọrụ niile.
Usoro 2: ụgbọala site na faịlụ
Ọ bụrụ na ị nwere naanị otu nchekwa na faịlụ kama ịpị oyiyi disk, ị nwekwara ike ide ha na CD ma mee ka ọ bụrụ ihe na-agagharị. Ọzọkwa, usoro a ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịmepụta ihe nrụnye abụọ. Biko mara na ị nwere ike iji nhọrọ ọzọ iji dozie diski - mepụta ihe oyiyi na ya ma gbaa ya ọkụ na CD-R.
Gụkwuo: Ịmepụta ihe oyiyi na UltraISO
Iji kwalite site na disk ahụ, anyị chọrọ faịlụ buut maka Windows XP. N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ịnweta ya site na isi mmalite akwụkwọ, ihe niile maka otu ihe kpatara ịkwụsị nkwado, yabụ ị ga-eji nyocha ọzọ mee ihe ọzọ. The faịlụ nwere ike inwe aha. xpboot.bin kpọmkwem maka XP ma ọ bụ nt5boot.bin maka usoro NT niile (eluigwe na ala). Nchọgharị ọchụchọ kwesịrị ịdị ka nke a: "xpboot.bin download" enweghị nzacha.
Mgbe ịmalite UltraISO gaa menu "Njikwa", mepee ngalaba na aha "Ọhụrụ" ma họrọ nhọrọ "Bootable Image".
Mgbe nzọụkwụ gara aga, windo ga-emeghe na-akpali gị ịhọrọ faịlụ nbudata.
Na-esote, dọrọ faịlụ site na folda ahụ gaa na arụmọrụ nke usoro ihe omume ahụ.
Iji zere nkwụsị nke diski, debe uru na 703 MB na elu aka nri nke interface ahụ.
Pịa na akara diskette iji chekwaa faịlụ oyiyi ahụ.
Họrọ ebe na diski ike, nye ya aha wee pịa "Chekwa".
Ihe nkesa multi-boot dị iche na nke ndị mbụ na ha nwere ike, na mgbakwunye na ihe oyiyi nke sistemụ arụmọrụ, nwere ụlọ ọrụ dị iche iche maka ịrụ ọrụ na Windows n'enweghị mmalite ya. Tụlee ihe atụ na Kaspersky Rescue Disk si Kaspersky Lab.
Nke mbụ, anyị kwesịrị ibudata ihe dị mkpa.
Disk na Kaspersky Anti-Virus dị na ibe a nke ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ laabu:
Download Kaspersky Rescue Disk site na saịtị ọrụ
Iji mepụta mgbasa ozi multiboot, anyị ga-achọkwa usoro Xboot. Ọ bụ ihe ọhụụ na ọ na-emepụta ihe ọzọ menu na buut na oke nke nkesa integrated n'ime oyiyi ahụ, ma nwekwara ya QEMU emulator iji nwalee arụmọrụ nke oyiyi ahụ e kere eke.
Download na peeji nke na weebụsaịtị
Mwepụta Xboot ma dọrọ faịlụ oyiyi Windows XP n'ime windo mmemme ahụ.
Ihe na-esote bụ aro ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ maka ihe oyiyi ahụ. Ga-eme anyị "Grub4dos ISO oyiyi Emulation". Ị nwere ike ịchọta ya na ndepụta ndenye edepụtara na nseta ihuenyo. Mgbe ịhọrọ click "Tinye faịlụ a".
N'otu ụzọ ahụ anyị na Kaspersky tinye disk. Na nke a, nhọrọ nkedo ebu ibu nwere ike ọ gaghị adị mkpa.
Iji mepụta ihe oyiyi, pịa bọtịnụ. "Mepụta ISO" ma nye aha onyinyo ọhụrụ, ịhọrọ ebe ị ga-azọpụta. Anyị pịa Ok.
Anyị na-echere usoro ihe omume iji nagide ọrụ ahụ.
Ọzọ, Xboot ga-enye gị iji gbaa QEMU iji mee ka onyinyo ahụ dị mma. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ịnakwere ijide n'aka na ọ na-arụ ọrụ.
Utu bu isi na ndepụta nke nkesa ga-emepe. Ị nwere ike ịlele onye ọ bụla site na ịhọrọ ihe kwekọrọ na akụ na ịpị Tinye.
Enwere ike ide ihe oyiyi a na diski na enyemaka nke otu UltraISO. Enwere ike iji diski a mee ihe dịka nhazi na dịka "ngwọta".
Taa, anyị mụtara otu esi emepụta mgbasa ozi nwere ike iji sistemụ arụmọrụ Windows XP. Ndị a ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtinye ma ọ bụ rụkwaa, yana nke ọrịa virus na nsogbu ndị ọzọ na OS.